Red Wine Bottle Abakhiqizi & Abahlinzeki - China Red Wine Bottle Factory
Izinga eliphakeme le-burgundy screw cap iwayini lengilazi ibhodlela
Sithatha "ukusebenziseka kwamakhasimende, okugxile kwikhwalithi, ukuhlanganisa, ukwenza izinto ezintsha" njengezinjongo. "Iqiniso nokwethembeka" yindlela yethu yokuphatha ekahle yokuhlinzeka ngebhodlela lewayini elihamba lonke, elithonywe emakethe esheshayo yokwakha ukudla okusheshayo neziphuzo okudlekayo emhlabeni wonke, sifuna phambili ekusebenzisaneni nabalingani / amaklayenti ngokwenza imiphumela emihle ndawonye. Intengo yamabhodlela engilazi eshibhile eshibhile, iminyaka engaphezu kwengu-20, izinkampani ezinolwazi ezivela emhlabeni wonke zisithatha njengabalingani bazo besikhathi eside futhi abazinzile. Sigcina ubudlelwane bebhizinisi obuqinile namazwe angaphezu kwama-60.
Ukuphrinta Okumibalabala Kufakwe Ibhodlela Lewayini Elingamaphepha
Siqhubeka nombono wokuthi "ikhwalithi yokuqala, umhlinzeki ekuqaleni, ukuthuthuka okungapheli nokwenziwa okusha ukuze kuhlangatshezwane namakhasimende" nabaphathi kanye no "zero defect, zero complaints" njengenhloso ejwayelekile. Isiqondiso sakho singamandla ethu angunaphakade kagesi! Wemukele ngemfudumalo amaklayenti ekhaya lakho naphesheya kwezilwandle ukuze aye enhlanganweni yethu. Sizoqhubeka nokuzinikela ekuthengiseni nasekuthuthukiseni umkhiqizo futhi sakhe isevisi ebumbeke kahle kumakhasimende ethu ukuze sakhe ikusasa eliqhakazile. Khumbula ukuxhumana nathi ukuthola ukuthi singasebenzisana kanjani
Fakela ibhodlela lewayini le-premium burgundy
Unomlando omuhle wesikweletu sebhizinisi, usizo oluhle kakhulu lwangemva kokuthengisa nezinsiza zokukhiqiza zesimanje, manje sesizuze isimo esihle phakathi kwabathengi bethu emhlabeni wonke ngentengo enhle nekhwalithi engcono. Ibhodlela lewayini lethu le-amber le-750ml le-amber glass le-burgundy elenziwe ngentengo enhle, ikhwalithi ephezulu ephezulu, ukulethwa okusheshayo kanye nezinsizakalo ezinokwethenjelwa ziqinisekisiwe. Sicela usazise imfuneko yakho yobungako ukuze sikwazi ukukwazisa ngentengo ngokufanele. Manje, ngokuthuthukiswa kwe-intanethi, kanye nomkhuba wokwenziwa kwamazwe omhlaba, sinqume ukunweba ibhizinisi emakethe yaphesheya. Ngesiphakamiso sokuletha inzuzo ethe xaxa kumakhasimende aphesheya ngokunikeza ngqo.
Ibhodlela lewayini elibomvu leBurgundy
Ukuqinisa kaningi uhlelo lokuphatha ngenxa yomthetho othi "ngobuqotho, ukholo oluhle kakhulu kanye nekhwalithi ephezulu kuyisisekelo sokuthuthukiswa kwamabhizinisi", sithatha kabanzi ingqikithi yemikhiqizo ehlobene emhlabeni jikelele, futhi ngokuqhubekayo sithuthukisa imikhiqizo emisha ukufeza izidingo amakhasimende. Imikhiqizo yethu kanye nezixazululo zamukelwa kabanzi futhi zithembekile ngabasebenzisi nazo zihlangabezana nezidingo zezomnotho nezenhlalo eziguqukayo ngokuqhubekayo. Phakela ibhodlela lengilazi lentengo enhle kakhulu, ibhodlela lotshwala, ukwaneliseka nesikweletu esihle kuwo wonke amakhasimende kuyinto yethu eza kuqala. Sigxila kuyo yonke imininingwane yokucubungula ama-oda kumakhasimende aze athole imikhiqizo ephephile nephelele enensizakalo enhle yezinsiza kanye nezindleko zokonga. Ngokuya ngalokhu, imikhiqizo yethu ithengiswa kahle emazweni amaningi.
Ifektri yokukhangisa ye-China Round Shape 750ml Green Bordeaux Glass Wine Bottle
Siqhubeka nomgomo "wokuqala wekhwalithi, isevisi kuqala kakhulu, ukuthuthuka okuqhubekayo nokwenziwa okusha ukuze kuhlangatshezwane namakhasimende" okuphatha kanye ne "zero defect, zero izikhalazo" njengenhloso yekhwalithi. Manje sesibheke phambili ekubambisaneni okukhulu kakhulu nabathengi abaxhomeke ezinzuzweni ezingezekile. Uma unesithakazelo kumikhiqizo yethu, qiniseka ukuthi uxhumane nathi ukuthola amanye amaqiniso. Ifektri yokukhangisa ye-bordeaux iwayini. Inkampani yethu inesistimu yokuphatha ephelele nangemva kokuthengisa uhlelo lwensizakalo. Sizimisele ukubambisana namakhasimende ahlukene asekhaya naphesheya kwezilwandle ukuze sithole ikusasa elingcono nelingcono.
Umkhiqizi we-OEM / ODM China i-750ml Dark Green Bordeaux Wine Glass Bottle
Izixazululo zethu zivunywa kabanzi futhi zithembekile ngabasebenzisi bokugcina futhi zingahlangabezana nezidingo zamakhasimende zemfuneko ye-OEM / ODM Uma kwenzeka uphishekela izinto ezisezingeni eliphakeme, ezizinzile ze-Hi, amanani entengo amahle, i-JUMP ukukhetha kwakho okukhulu! Izinto Eziyisisekelo: Uhlobo Lokumiswa Kwengilazi: Ukhokho noma njengemfuneko Isampula: Kunikezwe i-OEM / ODM: Umbala weCape owamukelekile: Umbala Wokwezifiso Wokwezifiso: Round
Ibhodlela lewayini lengilazi le-bordeaux elingu-750 ml
Ukuphathwa kwendawo: Ukuphrinta kwesikrini, ukuwosa, ukuphrinta, ukubhoboza isanti, ukuqopha, ukusika umbala nokufafaza umbala al okusalungiswa, njll. Ukusetshenziswa Kwezimboni: Iwayini elibomvu, ubhiya, isiphuzo, i-champagne, iwayini leqhwa, njll Izinto Eziyisisekelo: Uhlobo Lokumiswa Kwengilazi: Ukhokho noma njenge imfuneko Isampula: Kunikezwe i-OEM / i-ODM: Umbala weCap owamukelekayo: Umumo Wombala Wokwezifiso: Round
Amabhodlela ewayini eBordeaux
Umbala: Okumnyama, okuluhlaza okotshani, okucacile, okuphuzi noma okwenziwe ngokwezifiso Thatha umthwalo wemfanelo ogcwele wokuhlangabezana nazo zonke izidingo zamakhasimende ethu, uzuze intuthuko eqhubekayo ngokukhuthaza ukukhula kwamakhasimende ethu. Iba umlingani wokubambisana wamakhasimende futhi wandise izintshisekelo zamakhasimende e-bordeaux champagne wine ngentengo enhle. Khetha thina, futhi ngeke sikwenze uzisole! Ibhodlela lewayini elishibhile kakhulu, iwayini elibomvu, ngenhloso "zero defect" .Samukele ngemfudumalo abangane abavela kuwo wonke umhlaba ukuthi basivakashele futhi basiqondise ukuze sikwazi ukufeza umgomo wokuwina ndawonye.
Ibhodlela lewayini leBordeaux eline-cap cap
Isihluthulelo sempumelelo sithi "Ikhwalithi Yomkhiqizo Omuhle, Intengo Enengqondo Nensizakalo Esebenzayo". Ngokuvamile sibheke phambili ekwakheni izinhlangano zebhizinisi ezisebenzayo namakhasimende amasha emhlabeni jikelele. Sinikeza ngebhodlela lewayini lengilazi elisezingeni elihle, sinentengo enhle engenakuhlulwa kanye nensizakalo enhle kakhulu. Uyemukelwa ukuthumela amasampula akho nendandatho yombala kithi lapho sizokhiqiza izimpahla ngokwesicelo sakho. Uma unentshisekelo kunoma imiphi imikhiqizo esiyinikezayo, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi ngqo ngeposi, ngefeksi, ngocingo noma nge-inthanethi. Silapha ukuphendula imibuzo yakho kusuka ngoMsombuluko kuya kuMgqibelo futhi sibheke phambili ekusebenzisaneni nawe.
Idumela eliphakeme I-China Glass Wine Bottle750ml Bordeaux Bottle
Ice iwayini ingilazi iwayini ibhodlela burgundy iwayini
Imvamisa okugxile kumakhasimende, futhi kungukugxila kwethu ekugcineni ekubeni hhayi omunye wababhekele kakhulu, kepha futhi nokuba ngumhlinzeki othembekile nothembekile, sinikezela ngamakhasimende ethu ngentengo enhle futhi neqembu lethu lobuchwepheshe elinekhono lingahle likusebenzele ngenhliziyo yonke. Sikukwamukele ngobuqotho ukuthi uvakashele iwebhusayithi yethu nebhizinisi futhi usithumele uphenyo lwakho. Ibhodlela lekhwalithi ephezulu kuJUM. Ukulawulwa kwekhwalithi okuqinile kwenziwa kusixhumanisi ngasinye senqubo yonke yokukhiqiza.Sithemba ngobuqotho ukusungula ukubambisana okunobungane nokuzuzisa nawe. Ngokususelwa kwizisombululo ezisezingeni eliphakeme nensizakalo ephelele yangaphambi kokuthengisa / ngemuva kokuthengisa, amanye amaklayenti abebambisane nathi iminyaka engaphezu kwengu-20.
Amabhodlela e-OEM ODM antique green burgundy green wine amabhodlela ane-cork top
Ikhwalithi ephezulu Okokuqala, futhi i-Consumer Supreme iyisiqondiso sethu sokunikeza insizakalo ezuzisa kakhulu kubathengi bethu. Njengamanje, sizama konke okusemandleni ethu ukuba sibe phakathi kwabathengisi abaphambili endaweni yethu ukufeza abathengi isidingo esikhulu kakhulu sokuba nebhodlela lewayini le-burgundy. Samukele ngobuqotho amakhasimende avela emhlabeni wonke ukuthi asivakashele, ngokubambisana kwethu okunezinhlobonhlobo futhi sisebenzisane ukuthuthukisa izimakethe ezintsha, ukudala ikusasa lokuwina eliwinile. Ithimba lethu lazi kahle izimfuno zemakethe emazweni ahlukene, futhi liyakwazi ukuletha izimpahla ezisezingeni elifanele ngamanani angcono ezimakethe ezahlukene. Inkampani yethu isivele isungule iqembu elinamakhono, lokudala nelibhekele ukusiza amakhasimende.
Imbiza Yokugcina Amafutha Olive, Isikwele Ibhotela Lamafutha Omnqumo, I-Olive Oil Bottle, 250ml Olive Oil Bottle, Ibhodlela Lamafutha Omnqumo, I-Olive Oil And Vinegar Glass Cruet,